काठमाडौंमा जताततै भीडै भीड, जोगिने कसरी ? |काठमाडौंमा जताततै भीडै भीड, जोगिने कसरी ? – हिपमत
राजधानीका पहिलाका व्यस्त बजार जानुहोस्– लाग्छ, अहिले देशमा कोरोना महामारी छ र ? जताततै भीडै भीड छ। चोक–चोकमा बन्द गरिएका ट्राफिक लाइट खोलिएका छन्। सवारी जाम सुरु भइसकेको छ। सडकपेटीमा पैदलयात्रुको चाप छ।